News @ M-Media - Page 3508 of 3578 -
Construction ofaMuslim mosque in Kachin state’s jade-rich Hpakant township in northern Burma ceased on April 12 when a[Read More…]
April 17, 2012 — English Version
သမိုင်းနဲ့သွေး အတွက်ရတဲ့ အလေး
မြန်မာမွတ်စလင်မ်….. လူ့အညွှန့်တုံးဘဝကိုပျက် ယဉ်ကျေးမှုနာစေတဲ့ အရက်ဆိုင်ဖွင့်စီးပွါးမရှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် စာရိတ္တပျက် နိုင်ငံသိက္ခာကျ အရှက်ရစေတဲ့ ဇိမ်ခန်းဖွင့် စီးပွားမရှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် စီးပွားပျက် အကြွေးနွံ့နစ် ဘဝတုံးစေတဲ့ အပေါင်ငွေတိုးစီးပွါးမရှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် တိုင်းပြည်သစ္စာဖောက် အကျိုးယုတ်စေတဲ့ ယုတ်ညံ့အလုပ်ဘယ်မလုပ် မြန်မာမွတ်စလင်မ်[Read More…]
April 17, 2012 — Our Perspectives, ကဗျာ
မွတ်စလင်မ်တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ?
အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ပက်သက်ပြီး မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဂျာမန်မွတ်စလင်မ်သာသနာ့ပညာရှင် ပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေကို ကျွန်တော် သဘောကျမိတယ်။ သူပြန်ဖြေတာက ဒီလိုဗျ…. ပထမကမ္ဘာစစ် ကိုဘယ်သူစတင်ခဲ့သလဲ? မွတ်စလင်မ်တွေလား?…. ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကိုကောဘယ်သူစတင်ခဲ့သလဲ? မွတ်စလင်မ်တွေလား? သြစတြေးလျမှာ အဘိုးရီဂျင်း မျိုးနွယ်ဝင် လူသန်းပေါင်း၂၀[Read More…]
April 15, 2012 — Media To Monitor, Our Perspectives, ဆောင်းပါး
Previous 1 … 3,506 3,507 3,508 3,509 3,510 … 3,576 Next